Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Oo Ka Hadlay shirkii Xisbiga, Qodobbadii Kasoo Baxay Iyo Jawigii Lagu Soo Gunaanaday - Jigjiga Online
HomeSomalidaRa’iisal Wasaare Abiy Ahmed Oo Ka Hadlay shirkii Xisbiga, Qodobbadii Kasoo Baxay Iyo Jawigii Lagu Soo Gunaanaday
Addis Ababa (JigjigaaOnline) – Ra’iisal wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobbadii maanta layskula qaatay shirkii xisbiga EPRDF loogu guurinayey Dalladda Cusub ee bah-wadaagta xisbiyada ee lagu soo kordhinayo axsaabta deegaamadii aan hore xubinta buuxda uga ahayn xisbigaas.
Ra’iisal wasaaruhu wuxuu sheegay in shirkii guddida fulinta EPRDF ee socday muddada saddexda maalmood ah lagu lafo-guray saddex arrimood oo muhiim ah.
Farriin uu ku soo qoray bogga uu ku leeyahay Facebook, ayaa waxa uu Ra’iisal Wasaaruhu ku yidhi:
“Maanta waxaanu ansixinay oo aanu meel-marinay xisbiga cusub ee lagu midoobayo. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay, shirkeennu wuxuu taabtay saddex arrimood oo muhiim ah.
Ugu horreyntii, waxaan doodo qoto dheer ka yeelanay ku biiritaanka Xisbiga iyo ka qaybqaadashadiisa iyo in la ballaadhiyo. Midda labaad, waxay ahayd in barnaamijka xisbiga loo qaabeeyo inuu sare u qaado qaybaha kala duwan ee bulshada. Midda ugu dambaysa, waxaanu waafajinay shuruucdii.
Wada-hadalladii saddexda maalmood socday, waxa lagu soo gunaanaday si daahfurnaan iyo dimuquraadiyad leh oo ay soo dhaweeyeen madaxda xisbigu, taas oo aan aad ugu faraxsanahay.”
Hadalka Ra’iisal Wasaaraha ayaa soo baxay inyar kaddib markii uu dhamaaday shirkii Guddia Fulinta EPRDF uga socday Addis Ababa, kaas oo saddex qodob oo aasaasi ah oo kasoo baxay lagu ansixiyey, isla markaana loo gudbiyey Golaha dhexe ee EPRDF si ay u ansixiyaan.
Qodobbada la ansixiyey ayaa kala ahaa:
1. Barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga cusub ee isbahaysiga ah ee hawlaha ka-qaybgalka, wadaraynta iyo horumarka loo dhan yahay ee bulshada tixgelinaya.
2. Ansixinta xeer hoosaadka xisbiga cusub ee isbahaysiga EPP yeelanayo
3. In Luuqadaha xisbigu ku shaqaynayo ay noqdaan Axmaari, Af-Soomaali, Af-Oromo, Tigree iyo Af-Canfari.